Mampiseho Ny Fakàna An-keriny An’ireo Mpanao Gazety Ekoadaoreana Roa Fa Mbola Lavitra Ny Lalan’ny Fandriampahalemana Ao Kolombia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2018 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Deutsch, 繁體中文, Français, polski, عربي, Español
“#WeAreMissing3. Miaraka aminareo izahay.” Sary avy amin'ireo tonian-dahatsoratry ny gazety El Comercio, naparitaka tao amin'ny aterineto ary anisan'ny hetsika NosFaltan3.
Lafiny hafa mampaha-sarotra ny lalan'i Kolombia mankany amin'ny fandriampahalemana taorian'ny 50 taona mahery nisian'ny ady mitam-piadiana ny fakàna an-keriny ekipa mpanao gazety nataon'ny vondrona mpisintaky ny FARC (Tafika Revolisionera Mitam-piadiana ao Kolombia) tao amin'ny sisintany ifanolorana amin'i Ekoadaoro.
Nahatonga ny famerenana basy miisa 9000 sy tahan'ny vono olona ambany indrindra tao anatin'ny 30 taona ny dingana (vono olona 24 isaky ny mponina 100.000). Na izany aza, tsy ireo mpikambana rehetra ao amin'ny FARC no nanaiky ny fifanarahana fandriampahalemana, nitambatra tao anatin'ny vondrona ahitana mpanao trafika rongony ihany koa ny sasany.
Hatramin'izao tamin'ity taona ity, baomba efatra sy fiara roa voasesika baomba no namely an'i Ekoadaoro. Ny volana Janoary 2018, nanambara firenena latsaka an-katerena tao amin'ny faritra maromaro ao amin'ny firenena ny filohan'i Ekoadaoro Lenín Moreno noho ny fanafihana tao an-tanànan'i San Lorenzo, ao amin'ny faritanin'i Esmereldas eo amin'ny sisintany ifanolorana amin'i Kolombia, izay naharatràna olona 14 sy niteraka fahasimbana goavana tamin'ny tranon'ny polisy. .
Raha mbola nanotombatombana ny fahavoazana nisy ny governemanta Ekoadaoreana, nanangana fanairana hafa ny media sosialy sy ny mpanao gazety: mpanao gazety roa sy mpamily avy ao amin'ny gazety El Comercio no nisy naka an-keriny ny marainan'ny 26 martsa 2018 tao an-tanànan'i Mataje, faritanin'i Esmeraldas ihany koa.
Tamin'ny andro nanamafisan'ny minisitry ny Atitany César Navas ny vaovao, nihaona tamin'ireo mpisolovavan'ny gazety sy ny fianakavian'ireo nalaina an-keriny ny minisitry ny fiarovana, mpampanoa lalàna, mpanelanelana ny vahoaka amin'ny fitondrana, ny miaramila sy ireo lehiben'ny polisy mba hanoro hevitra azy ireo mikasika ireo fitsipika arahina amin'ny toe-javatra toy izany.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay nanaovan'i Navas ny fanambarana ofisialy, nanambara koa izy fa mety ao Kolombia ihany ireo nalaina an-keriny.
Araka ny filazan'ny komandin'ny miaramila Kolombiana, ny Jeneraly Alberto Mejía, dia i Walter Patricio Artízala Vernaza, fantatra ihany koa amin'ny hoe “Guacho”, mpitarika ireo nisintaka tao amin'ny FARC any atsimo atsinanan'i Kolombia, no lehilahy ao ambadiky ny fakàna an-keriny. Nanambara tamin'ny RCN Radio ny jeneraly fa ny angom-baovao avy amin'ny sampam-pitsikilovana voarain-dry zareo no nilaza fa ireo mpiady anaty akata sy ny lehilahy eo ambanin'ny fifehezany no nihazona ireo Ekoadaoreana.
Nilaza tamin'ny onjam-peo eo an-toerana ny minisitry ny atitany Navas fa nahatezitra ny vondrona mpisintaka FARC (izay heverin'ny fanjakana fa tsy ara-dalàna) ny hetsika fanarahamaso sy ny bemidina natao tao amin'ny sisintany ary “tsy mitady vola [ary tsy] nitaky takalony” ireo mpaka an-keriny .
Fahavoazana eo amin'ny zotra mankany amin'ny fandriampahalemana?
César Cedeño, manam-pahaizana manokana momba ny raharaha ara-tafika, nandinika ny fiantraikan'ireny toe-javatra ireny. Nilaza izy fa tena ilaina mba hahatakarana ny herisetra tonga any Ekoadaoro ny raharaha El Salvador, ary tokony heverina ho “fitambaran'ny fikambanana mpanao heloka bevava sy mpikomy” ireo vondrona mbola ao amin'ny faritry ny sisintany:
Nitranga tamin'ny ady an-trano Salvadoriana ihany koa ny tahaka izany: vokatry ny zotra mankany amin'ny fandriampahalemana ny maras [jiolahy] izay malaza ratsy ankehitriny noho ny fiantraikan'ny zavatra ataony eo amin'ny filaminan'ny olom-pirenena any Amerika Afovoany sy Etazonia. Nampiasa ny fahaiza-manaony amin'ny ady mba hanokana ny tenan'izy ireo amin'ny hetsika heloka bevava ireo mpiady anaty akata taloha avy amin'ny Mandam-Panafaham-Pirenena Farabundo Martí tsy namerina ny fitaovam-piadiany, ireny no maras
Mampiseho ity tranga ity fa, raha ny marina, izany no mety hitranga amin'ny zotra mankany amin'ny fandriampahalemana Kolombiana. Azo inoana fa nandray fanapaha-kevitra tsy hanaiky tsy hihetsika fotsiny ireto sisan'ny FARC ireto : fikajiana ny tombony andrasana raha ampitahaina amin'ny fandaniana andrasana. Raha mijanona ho fikomiana ny azy ireo, dia mety ho tena manan-danja eo amin'ny resaka varotra zava-mahadomelina sy fitaovam-piadiana ny vokany. Ny zavatra efa atrehin'izy ireo no vokany: famondronana tsy tapaka ny tafika sy polisy Kolombiana
#NosFaltan3 (Very 3 izahay)
Hatramin'ny fanambaràna momba ny fakàna an-keriny, mpanao gazety avy amin'ny fikambanana media isan-karazany no nivorivory ny alin'ny 27 Martsa nandritra ny fijoroana arahin-dabozia tao amin'ny Plaza Grande ao Quito mba hitaky ny hanafahana ireo mpiara-miasa aminy. Nangataka ny governemanta izy ireo mba hanao izay azon'izy ireo atao hiantohana ny fiverenan”ireo mpanao gazety roa sy ny mpamily ao amin'ny El Comercio eny anivon'ny fianakaviany.
Lohahevitra nalaza be tao amin'ny media sosialy ny tenirohy #NosFaltan3, izay midika hoe “very 3 izahay”
Ny minisitry ny fiarovana, Patricio Zambrano, ao amin'ny fijoroana arahin-dabozia ao amin'ny Plaza Grande ao Quito
Fijoroana mangina, mampalahelo… tsapa lalina. Androany alina, nihaona tao Plaza Grande izahay mpanao gazety sy naman'ireo mpiara miasa telo nalaina an-keriny
Mieritreritra ny fiantraikany midadasika, nandinika ny resaka nifanaovana tamin'ireo mpianatra asa fanaovan-gazety mikasika ny mety ho fiantraikan'ny zava-nitranga i Eduardo Varas, Ekoadaoreana mpanoratra tantara sady mpanao gazety, tsy niresaka mikasika ny zo hanana fandriampahalemana sy filaminana ao Ekoadaoro ihany, fa ho an'ireo izay maniry ny hiasa ho mpanao gazety koa:
Niresaka momba ny fisalasalan'ny mpanao gazety mendrika indrindra sy ny fiezahana hamaha izany fisalasalàna izany amin'ny alàlan'ny fanadihadiana izahay. Ary nilaza tamiko izy ireo fa midika koa izany hoe mety hampidi-doza anay ny fanaovana ity asa ity. Tsy nieritreritra an'izany aho. Tsy tamin'izany fomba izany. Tsy nanome anay antony hijerena izany amin'ny fomba tahaka izao ny tena zava-misy marina. Azo ampianarina ao anatin'ny toe-javatra toy izao ve ny asa fanaovan-gazety? Ahoana no ahafahanao manaisotra ny tahotra eo amin'ny tarehin'ny tanora mijery anao toy ny hoe tsy mety mino ny zava-mitranga izy ireo? Tsy fantatro.